Ukubeka esigabeni senja, abaningi ufuna zohlobo okungahambisani elachitheka futhi ayinakho iphunga ezingemnandi. On iphunga inja kodwa zohlobo ngaphezulu nomthelela ezinye zezici baqaphe. Khumbula ukuthi ukukhetha inja kufanele siqondiswe ukubukeka hhayi kuphela kodwa nangenxa ikhono layo futhi ikhono ukuthatha kahle ayinakekele. Ngisho nezinja ukuthi ningachithi, abadinga ukunakekelwa okukhethekile. Noma yisiphi isilwane - akusiyo into yokudlala. Ngaphambi ukuthenga, qiniseka ukuthi ube nesikhathi esanele nokubekezela isilwane.
Ukukhetha zohlobo "ayinaphunga"
Kungakhathaliseki kukhona inja okungahambisani elachitheka futhi akusho ukuhogela? Cishe akekho. Kuye zohlobo bona ukukhiqiza "ukunambitheka" namandla noma buthaka. Izinja ukuthi musa ukuhogela:
Besshorstnye zohlobo. I njalo kunazo Mexican hairless futhi Chinese inja onesiqhova. Sinenkosi cishe awekho izinwele, okuyinto luhambisana nomthwalo akukho iphunga ihlanganiswe nobukhona yayo. Nokho, unakekele lo inja kuyinto enzima kakhulu: naphezu entula izinwele, udinga ukunakekelwa kwesikhumba olunzulu, kuhlanganise unomphela hair ukususwa. Ngesikhathi sasehlobo, isilwane kubalulekile gcoba umuthi ovikela isikhumba isikhumba, futhi ekwindla nasebusika - ukugqoka izingubo.
zohlobo Shorthaired kungekho undercoat. Lezi izinhlobo zihlanganisa terrier, Cairn Terrier. uboya, ngenxa ukuqina yayo, neze uthola elina akusho ayashesha ukubamba iphunga ezizungezile.
izinja eside-onezinwele ezimhloshana beswele undercoat. Namuhla, i-rock othandekayo kakhulu futhi waphoqelela ezihlobene kulesi sigaba - a Yorkshire Terrier. Anakho elingenamikhono kufana kakhulu isakhiwo ukuze izinwele womuntu. Kule ndaba, iphunga skunk kule zohlobo sishoda, kodwa izinwele kakhulu kakhulu ukubamba iphunga ezizungezile. Lezi izinja zidinga ukuwashwa nje kuphela isonto ngalinye, usebenzisa amathuluzi akhethekile. Ngemva kokugeza, izinwele ecwaninga futhi yomile ngempela. izinja enjalo ukuthi ningachithi futhi akusho ukuhogela, abadinga imali eyengeziwe for ukunakekelwa.
inja Healthy - isihluthulelo ukuntula iphunga
Lapho ekhetha inja okungahambisani useyanuka, kufanele sikhumbule ukuthi inja enjalo uzodinga ukunakekelwa ngokucophelela futhi enzima.
Akukhona nje zohlobo inja kuthinta ukutholakala nephunga lakhe eyinqaba. Uma inja liphilile, nephunga cishe akusho ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana. Nokho, izinja abanezinkinga noma izifo zesikhumba wokugaya ukudla, ngokushesha saqala ukuhogela unpleasantly. Noma yimuphi inja enempilo ukunakekelwa okufanele, cishe ayinaphunga. Kodwa ngalé kwalokho, izinja eziningi kudingeka ukuthi ningachithi.
inja phansi. insikazi ayinayo iphunga ezifana liphinyiselwe njengoba besilisa. Kodwa ngesikhathi estrus isimo uyashintsha, futhi inja iqala ukuhogela unpleasantly. Ukuze balahle i umfutho olfactory enjalo kwanele ukugeza unondindwa ngethuluzi ekhethekile.
Ubudala kuya iphunga. Ngokuvamile izinja ubudala eziye zabona izinkinga zezempilo uqale ukuhogela namandla, futhi ebhukuda isikhathi eside, isimo akashintshi.
Xhumana ngamanzi. Uma isilwane Uthanda ukubhukuda ku ichibi noma umfula, bese ngemva kwesonto ngeke ngempela enephunga skunk. Ukuze ayibulale, udinga ukugeza imoto inja inja. Esikhathini esiyiminyaka ekwindla, lapho ngokuvamile drizzles imvula inja uthola ezimanzi, ngokuvamile kakhulu kunenkinga ye iphunga. Ngemva ehamba inja imvula kumele kube Sula ngokucophelela noma ezomile. Ngisho izinhlobo of izinja ukuthi ningachithi, emva kwemvula ihlaba umkhosi iphunga ekhethekile.
uvolo yonke indawo
Moult - inqubo esivela ubunjalo umzimba noma yisiphi isilwane. Uvolo ubudala ishintshelwa entsha, futhi le nqubo ithatha izikhathi ezimbalwa ngonyaka. Abantu abaphethwe yokungezwani komzimba ukuze inja izinwele, zibancishe ithuba abe umngane zemilenze emine ekhaya. Kodwa kunabantu abangafuni ukuba ngilwe nesikhulu izinwele liwile. Kulokhu, kukhona indlela - ukuze uthole inja okungahambisani elachitheka.
Kukhona phakathi kwabaningi inja izinhlobo ukuthi ningachithi. Ngokuthenga lezi ezifuywayo, ngeke nsuku ukususa uboya ekhaphethini lombhede.
Izinja nge uvolo
Iphephandaba i-Boston Terrier is a elingenamikhono ezinzima. inqubo molting senzeka kanye njalo ngemva kweminyaka embalwa. Ngokunakekela efanele kanye izinwele ecwaninga elehla cishe indlu ngeke. Kuyinto inja yobukhulu aphakathi nendawo, okuyinto kuphela uhlala endlini, undemanding ekunakekelweni. Inja zalolu hlobo kufanelekile abantu bengenalutho olutheni ngokwezinto kakhulu isikhathi khulula - I-ke-yehora elilodwa kuphela ukuhamba ngosuku. Abantu abaningi banesithakazelo yinja okungahambisani elachitheka. Izithombe lezi zilwane kungabonwa ku-athikili yethu.
zohlobo Basenji has a ingubo emfushane kusengutsheni yoboya, kodwa fade ezingavamile kakhulu futhi olungaphelele. Lokhu inja kufanelekile abantu iguliswa inja izinwele. Kodwa ukuze ugweme ukunqwabelana engathandeki izinwele liyakhubeka efulethini isilwane vychosyvat kudingeka ibhulashi nge bristles elukhuni, ikakhulukazi phakathi molting. Izinja mobile kakhulu, enjengamakhiwane ukuhambahamba ngishaywe umoya emgwaqeni. Isici lezi izinja abasakwazi ukukhonkotha. Izinja zalolu hlobo kukhona ubungane, babe nedumela elihle futhi kuthi akufane nokwenzeka imikhuba ikati sika.
Inja enezinwele ezinde, ikhipha efana unwele lomuntu - kuyinto Maltese. Nokho, lezi izinja elachitheka futhi akuvamile ngenxa isakhiwo izinwele, musa abangele komzimba abantu. Ukuze Maltese kudinga ukunakekelwa ngokucophelela kakhulu. Nekama out inja, udinga ukusebenzisa emabhulashini eziningana ezahlukene nekama unwele ezinhle uqweqwe eside. Kuyadingeka ukuba ngezikhathi usike noboya ezindlebeni yenja, ngoba kungenziwa elahliwe futhi konakalise kokuzwa isilwane. Bathing izinja zalolu hlobo kumele okungenani ibe 1 isikhathi ezinsukwini ezingu-7, kulandele ecwaninga obuphelele.
Lawa izinhlobo eyinhloko izinja ukuthi ningachithi, kodwa abe sezinwele.
Inja, okuyinto has a esincane uvolo - a onesiqhova Chinese. Uvolo embozwe kuphela imikhawulo kwemilenze ikhanda besikhumba saleso silwane. Ngenxa yaleli lungiselelo, uvolo inja unemisebenzi zilwane ezingavamile. Linikeza ukuqonda endabeni yokuthi kukalutshwana kakhulu futhi olungaphelele. Amanzi Ukwelashwa inja kufanele ahlele zonke izinsuku ezingu-15, ngenkathi usebenzisa amathuluzi esikhethekile izindawo embozwe izinwele. Ngenxa yokushoda elingenamikhono, lezi izinja ngempela umnkantsha, ngakho-ke Kunconywa ukuthenga izingubo ezikhethekile ngabo. Njalo zidonse ukunaka kwanoma izinja ezincane ukuthi ningachithi.
Mexican zohlobo hairless idume ukuntula kwayo izinwele emzimbeni. Lokhu inja hypoallergenic, alupholi, akuyona impi for namazeze kanye nezinye izinambuzane Luhlala izilwane nge noboya, awusebenzi ukuhogela. Nokho, isikhumba isilwane sidinga ukunakekelwa okukhethekile. Encane inja izinhlobo ukuthi ningachithi, besaba kwakheke isithwathwa ezihlukahlukene ezidala isikhumba.
Uma uya ukuthola inja, kumele ube nesisindo zonke izinzuzo nezingozi kwezinhlobo ekhethiwe. Uma umuntu imatasa kakhulu futhi awukwazi achithe isikhathi esanele ukuze isilwane sakho, kufanele ukhethe inja linesizotha ngaphezulu. Uma iphunga uboya ngesikhathi molting engenzi ivumelane master esizayo, kungcono ukulahla ngokuphelele isikhungo i inja efulethini.
Ngisho nezinja ukuthi ningachithi, abadinga ukunakekelwa ngokukhethekile kumnikazi. Noma isiphi isilwane endlini - lena ngokuyinhloko kuwumthwalo omkhulu. Ngoba sonke siyazi ibinzana edumile kusukela indaba Little Prince: "We are necala labo walawula!"
Proper yokudla amazinyane
Amanzi amapaki Krasnodar esifundeni. Kuhle amanzi kwepaki (Krasnodar esifundeni)